ကလိုစေးထူး: ကိုမင်းမောင်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ..
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:10 PM
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ဖိုရမ်တိုင်းမှာ လက်ဖ၀ါးကို တဖက်စီ ကနေ မြင်တတ်ကြတဲ့ ပုံစံပေါက်နေတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ် ။
စစ်တပ်မှ လူတိုင်း မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကိုမင်းမောင်ပြောတာကို လက်ခံနိုင်ပေမယ့် ၊ စစ်တပ်ကြောင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်တာ ၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အခွန်ကို ပြန်အမ်းမယ်လို့ ပြောတာတွေကိုတော့ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါဘူး ။ အဲဒီ အကြောင်းအရာ၂ခုဟာ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတာကို သေချာ မကြည့်ရှုပဲ ပြောလိုက်တာပါပဲ ။
အနည်းဆုံး လူတယောက်ဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ၁၅၀ဒေါ်လာ တစ်လကို အခွန်ဆောင်ရတယ် (ဒါဟာ စင်္ကာပူ အစိုးရကောက်တဲ့ တစ်နှစ်စာ အခွန်ငွေနီးပါးနဲ့ ညီမျှတယ်) ။ စင်္ကာပူမှာ ဗမာတွေ သောင်းနဲ့ ချီပြီး ရှိကြတယ် ။ ဒါတောင် စင်္ကာပူတနိုင်ငံတည်း ။ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ဗမာတွေတွက် အဲလို အခွန်ပြန်အမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့တတွေ အားလုံး ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ လက်သင့်ခံဖို့ အသင့်ပါလို့ ပြောပါရစေ ။ ဒါပေမယ့် အမ်းမယ်ဆိုတဲ့ စကားမပြောခင် ဘယ်လောက်အမ်းရမယ်ဆိုတာ professional accountant ခေါ်ပြီး စာရင်းဇယားလေးနဲ့ တွက်ချက်ကြည့်ပါဦး ။
အေးချမ်းသာယာပါတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာနိင်ငံမှာ လူတချို့ အမြဲတမ်း မကြာခဏ အိမ်မှ လာခေါ်ခြင်းခံရတာတိုို့ ၊ လုံးဝအိမ်ပြန်မလာနိုင်တာတို့ ဖြစ်တိုင်း ၊ လူပျောက်ဆုံးသွားသော တိုင်ကြားချက် ရဲစခန်းမှာ မဖွင့်ရဲတာ ဘာလို့ပါလဲ ။
ကိုကလိုစေထူးရဲ့ ပိုစ့်မှာ ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်မိတဲ့တွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီကွန်မန့်ကို ဖျက်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ် ။
Apr 22, 2007, 12:07:00 AM
အခုမှ စစ်ဗိုလ်တယောက်နဲ့တွေ့ရလို့ အတော်ပဲ။ မေးချင်နေတာလေးတခုရှိနေလို့ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခန်းအနားကို ပျဉ်းမနားကျပ်ပြေးနေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတော့ စစ်ရေးပြကွင်းထိပ်က သစ်သားအရုပ်ကြီးသုံးရုပ်ဟာ လက်ရှိတပ်မတော်နဲ့ ဘယ်လိုများပတ်သက်နေပါသလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
Apr 22, 2007, 2:37:00 AM
After reading this post, I would like to share the experience I had got when I was quite young. I have been born and brought up fromamilitary family. During 88, I have watchedavideo showing that ppl were killing each other before military took over and builtapeaceful nation. Can you guys believe that we were forced to see this video in every evening as my family lived in military compound? That time, I was really thanked to military gov saving the life of the country. Don’t you think it was kind of brainwash? In that case, I am just only part of the military family. And I couldn’t imagine how the soldiers were trained.
P.S this is just my point of view to the military where my father worked for. Forgive me if it hurts someone. And can be deleted anytime.
Apr 22, 2007, 5:23:00 AM
စစ်တပ်ထဲက လူတော်တော်များများမှာ သူတို့မှ တိုင်းပြည်ချစ်တယ်၊ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးရှိကြတယ်။ ဒါတော့ ကိုယ့်ဟာကို အကောင်းမြင်တတ်တာ လူ့သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက ဘာတွေလုပ်နေသလဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ဘော့စ်က ဘာတွေလုပ်နေသလဲ ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ တပ်မတော်သားတွေ အမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့ မြင်နိုင်ကြပါစေပေါ့။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖျက်ပြီး သူတကာနိုင်ငံတွေလို ပုံမှန်စီမံကြဖို့က ပြည်သူတွေရဲ့ တာဝန်ပါ။ အကြောက်တရား ကင်းကင်းနဲ့ ကြိုးစားကြဖို့ပါပဲ။
Apr 22, 2007, 10:16:00 AM
ဟီ...ဟိ ပိုက်ဆံ ပြန်အမ်းမယ်ကြားလို့ လာတန်းစီတာ ဟို စစ်ဗိုလ်ဆိုတဲ့ လူဗျာ သူ ကျနော်တို့ ဆောင်ထားတဲ့ မဟားတရား အခွန်တွေကို ပြန်အမ်းမလို့ဆို..............
Apr 23, 2007, 12:19:00 AM
ဒီပို့စ်နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး..သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာကိုအမှတ်ရလို့ပါ..ကလိုစေးထူးကရောက်ရာနေရာရန်ဖြစ်တတ်တယ်..ကလောင်သွားများပိုပြီးထက်အောင်သွေးနေသလားလို့...အောက်မေ့မိပါတယ်.no offence to anyone.
Apr 23, 2007, 2:54:00 PM
ကျနော် အထူး သဘောကျမိတာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တင်တဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ ဒေါသတကြီးနဲ့ ရင့်သီးစွာပြောဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ တယောက်မှ မရှိတာပါ။ မိမိခံစားချက်ကို သိမ်မွေ့စွာ ဖော်ပြကြတာကိုသာ တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်ကို လေးစားပါတယ်။ အမည်မသိတယောက် မေးတာကိုလည်း လေးစားစွာ ဖြေပါမယ်။ လူဆိုတာ ချစ်သူ၊ မုန်းသူ နှစ်ဖြာရှိတဲ့ အတွက် မုန်းသူနဲ့ ရန်ဖြစ်ကောင်းလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကို ဘာမှ အထွေအထူးမပြောလိုပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့ သူငယ်ချင်းပြောတာ ဟုတ်ကောင်းလဲ ဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်သလို လွတ်လပ်စွာ ထင်နိုင်ပါကြောင်း.။
Apr 23, 2007, 4:49:00 PM
Apr 25, 2007, 1:11:00 AM
ဖတ်ပြီးတော့ မသက်မသာ ခံစားမိပါတယ် .. အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ လွတ်လပ်စွာနဲ့ မိမိရဲ့အတွေးတွေကို ဖလှယ်ကြ ၊ ဆွေးနွေးကြတာကို အတင်းတုတ်တယ်လို့ သတ်မှတ်တာတော့ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါဘူး ... ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ အခွန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမဆောင်ရရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို လူတွေက သိလာကြတယ် .. မိမိအသိုင်းဝိုင်းမှာ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေကြတယ် .. ဒီလိုမျိုးပေါ့ သူ့နေရာနဲ့သူ အားလုံးက အသုံးဝင်ပါတယ် ... တပ်မတော်ကို ဘယ်သူမှ မစော်ကားပါဘူး .. ဗိုလ်ချုပ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်က လွန်စွာ သန့်ရှင်းဖြူစင်ပါတယ် .. တပ်မတော်ကို ခုတုံးလုပ်ထားတဲ့ အာဏာရှင်ကိုသာလျင် လူတွေက အလိုမရှိတာပါ.. ပြည်သူအပေါ်ကိုလေးစားပြီး တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်ကို ကောင်းစေချင်တဲ့ အစိုးရဆိုရင် ပြည်သူတွေ ရင်ဖွင့်သံ ၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့် ၊ လွတ်လပ်စွာ တင်ပြပိုင်ခွင့် ၊ တရားမျှတသော ဥပဒေ ... အစရှိသဖြင့် အားလုံးကို ဆောင်ရွက်ပေးရမှာပါ ... လူဆိုတာ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ရှီပါတယ်.. တိုင်းပြည်အတွက် အခုချိန်မှာ တကယ်ပေးဆပ်မယ့် တပ်မတော်သားတွေလည်း ရှိချင်ရှိမှာပါ... ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးတောင်ပုပ်ရပါသေးတယ် ... တစ်လှေလုံးပုပ်နေတဲ့ ငါးတွေထဲမှာမှ ကောင်းတဲ့ငါး တစ်ကောင် နှစ်ကောင်ကို လူမမြင်တာ ဆန်းကြယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးရှင် ..
Apr 27, 2007, 10:18:00 AM
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေး၊　စီးပွားရေး၊　ပညာရေး
I would like to reply “loimwethu” message from here.
Basically, your thinking seems correct. Since you were
quite young at that time, you might not think other ways round.
Eg. Military might involve in 88’s serious situation.
(Military might make ppl to kill each other because they must use it as propaganda in coup d’e tat . I mean, Military could createareason of unstable situation to take control over Myanmar).
Sometime, even if you thoughtamatter is correct, there may be many possible rationales (which against the correct factors) behind it.
Even after Military built peaceful nation, why did they not go back to Army? If Military do not (not) think other ppl could handle well for our country, do they also really think, they are doing very well? If so, why is our country far left behind than other countries?
So, as I mentioned above (in mm language), I think, everybody must listen many ppl’s voices. And we must read/study more and more about other countries situation, what do other countries think of Myanmar, what are real things in Myanmar and etc.
I think, only Military govt’s propaganda’s media (newspaper, TV and whatever) does not make any sense to you to know our country’s real situation.
Apr 29, 2007, 11:34:00 PM
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ကျော်လောက်က ကျမနဲ့ ခင်တဲ့ စစ်သားတယောက်ကို မေးခွန်းတခု မေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
“တဖက်မှာ အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေ (သူ့ရဲ့ အထက်လူကြီးအပါအ၀င်) ရှိတယ်ပေါ့၊ ကျန်တဖက်မှာက ပြည်သူလူထု တွေ ကျောင်းသားတွေ ရှိတယ်။
ဆိုပါစို့ … အထက်က အမိန့်ပေးတယ် … ဒီလူတွေ (ပြည်သူလူထုနဲ့ ကျောင်းသားတွေ) ဟာ လူဆိုးတွေဖြစ်တယ် … အချုပ်အချာ အာဏာကို နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ရန်သူတွေဖြစ်တယ်…. သူတို့ကို ပစ်ရမယ် ဆိုရင် …. ပစ်မလား။ တကယ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း ကိုယ်က သိနေတယ်နော် …. အဲဒါဆို ပစ်မှာလား”
“ပစ်ရမှာပဲ …. ကျနော်တို့ စစ်သားဆိုတာ အထက်က အမိန့်ကို လွန်ဆန်လို့ မရဘူး”
အဲဒီအဖြေကို ကြားရတာ ကျမ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလူဟာ ငါးခုံးမအပုပ်လား … အကောင်းလား။ ကျန်တဲ့စစ်သားတွေရော … ဘယ်လိုများ ဖြေကြမလဲ။ ကျမ တွေးနေမိပါတယ်။
နိုင်ငံတခုမှာ တပ်မတော်ဆိုတာ လိုအပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဟုတ်ပါတယ်။
ဒီတပ်မတော်ဟာ ဘယ်သူ့အတွက်လိုအပ်တာလဲ။ အုပ်ချုပ်သူတွေ အာဏာမြဲဖို့လား၊ ပြည်သူလူထု အေးချမ်းသာယာစွာ နေထိုင်ဖို့လား။
ပြည်သူတွေဟာ စစ်သားတွေကြောင့် အေးအေးနေရတယ် ဆိုတာလည်း ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါရဲ့လား။
ဓားသွားထက် - ကလောင်သွား ထက်သတဲ့။
ကလောင်ကိုင်ပြီဆိုမှဖြင့် ထက်အောင် သွေးနေတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
မဟုတ်မခံသူကို ရန်လိုတတ်သူလို့ အပြောခံရတတ်တယ်။
သည်းခံပြီး ပြန်မပြောသူကို ဟုတ်လို့ငြိမ်နေတာလို့ ပြောကြပြန်တယ်။
မတရားတာတွေ၊ မှားတာတွေကို ကလောင်လက်နက် ခပ်ထက်ထက်နဲ့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါရဲ့ ကိုသံလွင်။
Apr 30, 2007, 9:08:00 AM
ဒီက လူတွေက တပ်မတော်ကို အပုတ်ချစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေမပါပဲ ထောက်ပြတဲ့ သဘောပါ။ အနာပေါ် ဒုတ်ကျ စရာမလိုပါဘူး၊ ဘယ်သူက မှ ကောင်းတယ်လို့ အပြောမခံရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ စဉ်းစားပါ။ ကောင်းစေလို လို့ထောက်ပြနေတာပါ။ီးကနေစစ်တပ်မှ တပ်သားက နေ ဗိုလ်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အထိ ဘယ်နှစ်ယောက်က နိုင်ငံတော် အတွက်လုပ်နေပါလဲ? စဉ်စားပါ။ ဘယ်သူက စစ်တပ်ထဲကိုဒီကနေ့မှာ မိမိဆန္ဒနဲ့ ၀င်နေပါလဲ။
၁.တပ်သားတွေအများစုမှာ ရပ်ကွက်မနိုင်၊ မိ မနိုင်၊ ဖမနိုင်လို့ စစ်တပ်ထဲရောက်နေသူတွေများသလို
၂. စစ်ဗိုလ် အများစု ဗိုလ်သင်တန်းတတ်ပြီးစစ်ထဲဝင်နေသူတွေ အများစုမှာ လစဉ်ပေးတဲ့လစာနဲ့ ဘယ်နှစ်ရောက် လောက်လောက် ဌ ဌ ရလို့ ဆိုင်းပြည်အတွက်လုပ်နေပါသလဲ။ ၁% တောင်မရှိပါဘူး၊ ပြည်သူကပေးတြ့ လစာ စား၊ ပြည်သူကပေးတဲ့ အရာအားလုံးကို ယူငင်ပြီး ပြည်သူကိုပြန် ဒုက္ခပေးတာ ကောင်းပါသလား။ ဘယ်သူကမှ စစ်တပ်ကို မကောင်းပြောတာဟုတ်သလို၊ စစ်တပ်က လူတိုင်းလည်းကောင်းတယ် မယူမှတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်တွေ့ လေ။ နောက်ဆုံး တခုပြောမယ် ဗျာ စစ်တပ်ဆိုတာ ပြည်သူရဲ့ သား၊ သမီးပါ။ ပြည်သူရဲ့ အဖ၊ ပြည်သူရဲ့ အမိ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဗိုလ်ချုပ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ဟာ ပြည်သူကို အုပ်ချုပ်ဖို့ မဟုတ်သလို အန္တာရယ်ပြုဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။ ဒါဆိုရင်သဘောပေါက်မှာပါ။ စစ်တပ်ရဲ့ အရေးပါမှုကိုလူတိုင်းနားလည်ပါတယ်။ နားမလည်ဖြစ်နေတာက ဒီကနေ့ စစ်တပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဘူးတာ ပြန်ပြောမယ်ဗျာ၊ စစ်တပ်ကိုမုန်းလို လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ စစ်တပ်မှာ လုပ်နေသူတွေမဟုတ်လို့ လုပ်နေတာပါ။ ကိုမင်းမောင်ကိုယ်တိုင်လည်းပြည်ပမှာနေ နေတာပဲ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ အပြင်မှာ ဖြစ်နေတာတွေ ဘာလို့ ကွာနေရတာလဲ သိမှာပါ။ စစ်တပ်မှာ ဒီမိုကရေစီ မရှိတာ မဆန်းပေမယ့်၊ ပြည်သူမှာ ဒီမိုကရေစီ မရှိတာ က ထူးဆန်းနေတာ။ ကိုမင်းမောင်ပြန်အမ်းမယ့် ငွေက ဘယ်က ရလို့ ၊ ဘယ်လိုရှာထားလို့ ဒီလောက်တောင်မှ ရက်ရောနေရတာလဲ? ခင်ဗျား မိသားစုက စိပွားရေးသမားတေါထင်ပါ့၊ စစ်ပွားရေးသမားမိသားစုက ပေါက်လာသူတွေလဲ ဒီကနေ စစ်တပ်ထဲမှာ မရှိသလောက်ပါဘဲ ထင်တယ်။ ခွေးတောင်မှ တခါ ကျွေးခဲ့ ဘူးတဲ့ အကျိုးကြောင့် တစိမ်းတရံ ကို ပြန်မကိုက်တဲ့ အပြင် အမြီးတောင်နှံ့ပြနေပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင်ခွေးလောက် အဖြစ်မရှိဖြစ်နေတာကို သိသိကြီးညိမ်ခံနေတာ ဘာလို့ လဲ့ ၊ .........? နောက်တခု ထပ်ပြောမယ် ပညာတတ် တိုင်း ဦးနှေဏ် မရှိပေမယ်၊ ဦးနှေဏ် မရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန် တောင် လက်ပေးသင်ရင် တတ်ပါသေးတယ်။ မပြောချင်တော့ဘူးဗျာ၊ ရင်နှာလွန်းလို့
May 2, 2007, 7:42:00 AM
ကိုမင်းကျော်... ခင်ဗျားလည်း ဒီရောက်နေတာကိုး...။ ကောင်းပါလေ့ဗျာ။ ဆွေးနွေးထားတာတွေ။ အပြန်အလှန် ဆော်ထားတာ တွေ...။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပရိသတ်ပါဗျို့...။ ဘာဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အရည်မရ၊ အဖတ်မရ..ကွမ်းစကားတော့ မလုပ်ကြနဲပ။
စစ်တပ် နဲ့ ပြည်သူ အမြင်ခြင်း ဖလယ် တာတွေ့ လို့ ၀မ်းသာပါတယ်
အပြင်မှာလဲ ဒီလို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး နိုင်တဲ့ အချိန် မြန်မြန်ရောက် ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်
(freedom of speech can be made only when we got democracy)
Bro or whatever....I was born in 1972 and I'm working as an engineer. Nevermind..Just telling about me. I also have friends in Military. Wow...they are great..they havealot cash and cars, have chances to go oversea for this training, that training,bla bla bla. They can buy nice houses and apartments in nice area of yangon within few years time. Ofcoz they don't like people are talking bad things about the origin of their wealth.
I pitty you Min Maung. Yes! you arealot younger than me. You said we love Bogyoke Aung San. Correct boy. In addition to this, we love his daughter, Daw Aung San Su Kyi also because of their sacrifices for us and country. None of your great leaders did anything good for country. You may say "no! they are "myo chit tway". Becarefull, I did not use patriots. Their 'myo chit' means Ngaamyo ko chit tel... Ngaamyo kaung sar yay...that's it. that's all. Are you blind or I do not know how much did you steal our country resources for your own enough to beablind and deaf. So lets stop lying to each other. We've got more than enough lies in the daily news papers since 1962. If you still do not agree, see yourself in the mirror and tell yourself "I'm hornest. I never use public properties and money. I'm notathief. I did some arrangements to earn money. I's not my fault......" Then you will confortable again. Cheers boy!